Booliska Mareykanka Oo Xidhay Ganacsato Xidhiidh La Leh Qareenka Donald Trump | Somaliland Mirror
Home WARARKA Booliska Mareykanka Oo Xidhay Ganacsato Xidhiidh La Leh Qareenka Donald Trump
Booliska Mareykanka Oo Xidhay Ganacsato Xidhiidh La Leh Qareenka Donald Trump
Admin 2Oct 11, 2019WARARKA0
Laba nin oo ka mid ah ganacsatada gobolka Florida oo xidhiidh la leh qareenka madaxweyne Donald Trump, mr Rudy Giuliani ayaa loo xidhay eedo maalgalin aan sharci aheyn oo dhanka ololaha, sida uu sheegay afhayeenka xafiiska xeer Ilaaliyaha Guud.
Ganacsatade Lev Parnas iyo Igor Fruman, ayaa loo xidhay iyada oo lagu heesto maalgalin sharci daro ah oo la xidhiidha olole siyaasadeed oo ka dhacay gobolka Newyork, sidaasi waxaa lagu yiri warbixin Khamiista maanta ah laga soo saaray xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Manhattan.
Labada nin ayaa markii la xidhayay qorsheynayay in y u duulaan habeenimadii xalay magaalada Vienna ee dalka Austria sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowlada Mareykanka.
Parnas iyo Fruman ayaa la filayaa in xilli danbe ee Khamiista maanta waqtiga maxaliga ah ee Mareykanka in la soo taago maxkamada magaalada Virginia, sida uu qoray Jaraa,idka Wall Street Journal.
Qareenka ganacsatadan mr John Dowd, ayaa diiday in warbaahinta uu la wadaago eeda loo jeediyay raggaan.
Mr Parnas ayaa ah ganacsade u dhashay Ukrain halka Fruman uu yahay ganacsade maalgaliya guryaha. waxaana lagu tuhmayaa in ay qeyb ka yihiin fadeexada hadheysay dowlada Mareykanka oo ku aadan in caawinaad ay weydiisatay Ukraine.
Xadhigaan ayaa imaanaya iyadoo aqalka hoose ee Congress-ka uu wado baadhitaano la xidhiidha madaxweyne Donald Trump oo caawinaad weydiistay dal Ajnabi ah si baadhitaan loogu sameeyo mid ka mid ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka.
Trump ayaa haddii ay ku cadaato fadeexadaan waxaa uu ka waayi karaa xilka sida ay sheegtay afhayeenka aqalka hoose ee Congress-ka.
Previous PostDowladda Soomaaliya Oo U Yeedhay Safiirka Kenya U Jooga Magaalada Muqdisho Next PostDawladda Somaliland Oo Ka Hadashay In Shirkadda Uganda Airlines Ay Markii U Horreysay Duulimaad Ka Bilowdo Magaalada Hargeysa